Iibso Buugga Buugga Buugga Buug -gacmeed ee Yar -yar ee dhoobada leh - Gaadiidka Bilaashka ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Mini ahama Steel Buugga Furimaha Dagaalka
$ 96.99 qiimaha joogtada ah $ 138.99
Color C2 Cas C2 Buluug C2 Cadaan C2 Black
C2 Casaan / Shiinaha C2 Buluug / Shiinaha C2 Cadaan / Shiinaha C2 Madow / Shiinaha C2 Buluug / Xiriirka Ruushka C2 Xiriirka Madow / Ruushka C2 Xiriirka Casaanka / Ruushka C2 Xiriirka Caddaanka / Ruushka
Mini ahama Steel Buug Furimaha Dagaalka - C2 Casaan / Shiinaha gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Biraha isku hagaajinta ee Furimaha C2 ayaa loo casriyeeyay qalabka birta ah. Timemore wuxuu badalay guga gudihiisa kooxda burr. Beddelaadda gugaani wax saameyn ah kuma yeelaneyso hufnaanta iyo isku dheelitirnaanta dhumucda budada kafeega
Magaca Badeecada: Waqti dheeri ah Chestnut C2 Furimaha Dagaalka Kafee
Cabbirka: Jirka147mm x52mm,
Midab: Caddaan / Madoow / Casaan / Buluug
S: Waa maxay sababta iskuhuhu u muuqdaa mid aan isku mid ahayn?
J: Marka hore, iska hubi in daboolka kore ee dusha ka sarreeya uu adag yahay. Hadday dabacsan tahay, isku day inaad u wareejiso saacad ka hor ilaa ay ka adkaato. Haddii aan la xallin, nala soo xiriir wixii caawimaad dheeraad ah.
S: Waa maxay sababta miisaanka hagaajiyaha uu aad ugu jilicsan yahay si uu u saxi waayo caatada?
J: Maxaa yeelay guga ama burcadu way ku dhagaan. Isku day inaad jirka qabatid oo xoogaa ruxdid ilaa aad ka maqashid guji, taas oo macnaheedu yahay guga ama burrsku way kala furan yihiin. Haddii kale, isku day inaad daboolka ka qaaddid daboolka dusha ka saraya sariirta oo aad u qaadatid boodhka oo dhan. Nadiifi xirmooyinka gogosha oo rakib. Ma qaadi doonno mas'uuliyad haddii macaamiisha ay ka soo horjeedaan ogeysiisyadan kor ku xusan.
Wax walba waa hagaagsan yihiin, qalabka warshadaha, shiidi isku mid ah, raadiyaha raadraaca ayaa ka gaabiyay kan wax shiidaya kafeega uu waqti u helay. Gaarsiinta wax ka yar laba toddobaad (Ukraine, Kharkov) Waxaan kula talinayaa qof walba.
Baakadaha casriga ah, maaddada, aalado.
Qalab wanaagsan oo leh dhibco laakiin aan ku habboonayn espresso
Waxay timid maalintii la cayimay, tayada waa heer sare, Melet sida la rabo, waayo espresso waa qumman yahay
Alaab aad u fiican. Bixinta waxay keentay 16 maalmood. Aad ugu qanacsan dhammayska iyo shiidi. Super ku talin!